Lammileen Oromoo Kaartuum jiraatan akka jedhanitti, baqattoota keessumaa lammiin Itiyoophiyaa ta’an dhimma waraqaa eenyummaan hidhuun kun ji’a sadii as jalqabe.
Ka’umsi waan kanaas akka baqattoonni jedhanitti waajjirri Immigreeshinii biyya Sudaan waraqaa baqattoota kanaaf yeroon haaressuufii dhabuudha jedhan.
Obbo Mahaammed Abdullaahii Abubakar baqataa Oromoo Sudaan ganna 8 oliif jiraataniidha. Isaanis yoo dubbatan mootummaan biyya sudaan eenyummeessaa baqattootaaf kennamu akka baafannu ajajee ofumaa ammoo yeroon nuuf kennuu didaa jiraa jedhan. Kanaanis baqattootni hedduun soda poolisii hojii dhaabanii manatti rakkataa jiru jedhan.
Obbo Mohaammed dabalanii torbee darbe kana dubreen ulfaa lammiin Itiyoophiyaa takka bakka eenyummeessaa kana baafatanirratti kuftee lubbuun ishee akka darbellee himu.
Baqataan Oromoo Kaartuum jiraatu kaan ka waan baqattoonni keessa jiran VOA’f hime Ahmed Abbaa Giddiiti. Baqattoonni waraqaa eenyummaa jedhame baafachuuf hedduu carraaqanus waajjirri waraqaa kana namaa kennu danqaa uumeera jedha.
Ahmed dabalee eenyummeessaan kun lammilee Itiyoophiyaa fi Keeniyaa qofaaf kennamaa jedhe. Ammas warri eenyummeessaa kana baafachuu hin dandeenye ji’a shanii oliif waajjira Immigireeshinii Sudaanitti rakkataa jiruu jedha.
Ahmed baqattoonni magaalattii keessa jiraatan kumaan lakkaa’aman bakka hedduutti to’annoo jela oolaa akka jiranis dubbata.
Baqataan Oromoo kaan ka yaada isaa VOA’f hime ka maqaan akka dhahamu hin feenes dhiyeenay Kaartuum naannoo Omdurmaantti qabamee akka hidhame, sana boodas paawundii sudaan kuma 20 kaffalee akka bahe hime. Baqattoonni yaada isaanii nuu kennan dhaabbati baqattoota gargaaru UNHCR nuuf hin birmatuu jechuun komatu.
Baqattoonni Oromoo lameen; Mahaammed Abdullaahii Abubakar fi Ahmed Abbaa Giddii waraqaa jedhame kana haga paawundii kuma 6 kaffalanii akka baafatan dubbatu. Haati warraa isaan lameenuu garuu kaffaltii kana kaffaluu waan hin dandeenyeef waraqaa galmee dhabanii jedhu. Mohaammed yoo dubbatu, haati warraa isaa hojii buna Verndaa jelatti gurguruu sodaa poolisiif jecha dhiiftee jechuun dubbata.
Rakkoo baqattootni keessa jiran kana jaarmayaan baqattoota UNHCR gaafatameera. Dhaabbatichatti qindeessaan saba himaalee idil addunyaa ka tahanRoolaand Showeenbaawor, UNHCR ka damee Kaartuum banaa ta’uu, torbanittis guyyoota shaniif baqattoota gargaarsa fedhan akka gargaaru himan. Kanaanis jaarmiyichi baqattootaaf gargaarsa maallaqaa, ka galmee fi carraa barnootaa laachuu akka taasisullee himani.
Komii baqattoonni mootummaarraa galmee dhorkamne jedhuuf deebii yoo kennanis, seerri Sudaan galmee baqattoonni galmee kana akka gaafataman hin ajaju, poolisiin biyyattii waan seeraan alaa hojjetaa jiraa jedhan. Warreen kumaan lakkaa’aman ka mana hidhaa jiru jedhaman dhaabbati keessan akkamitti gargaara jechaan gaafatamaniis, UNHCR waajjira baqataa mootummaa sudaan waliin tahuun akkuma duraanii abukaatoo ergee mana hidhaa sakatta’ee baqattoota kana gad lakkisiisuu itti fufaa jechaan deebisan.